Vavolombelon'i Jehovah eto Madagasikara - Wikipedia
Ny Vavolombelon'i Jehovah eto Madagasikara dia fikambanana kristiana miorina eto Madagasikara sy miray amin'ny Vavolombelon'i Jehovah maneran-tany. Ao Antananarivo no ahitana ny foibeny atao hoe Betela. Miisa any amin'ny 34 980 ny Vavolombelona mitory eto Madagasikara tamin'ny taona 2018.
1.2 Nanomboka tamin'ny nahazoana ny fahaleovan-tena
2 Jereo :
Tamin'ny 1925 no nitsidika voalohany an'i Madagasikara ny iraky ny Fikambanan'ny Vavolombelon'i Jehovah. Nisy ny iraka hafa tonga teto Madagasikara tamin'ny taona 1933, dia i Robert Nisbet sy i Bert Mcluckie avy ao Afrika Atsimo ka tamin'izany no tena nisian'ny fitoriana sady nizarana boky maro voalohany. Tamin'ny taona 1955 dia niainga avy tany Frantsa ka tonga teto Madagasikara tao Toamasina, avy eo nankany Antananarivo i Adam Lisiak sy i Edouard Marlot mpisava lalana manokana izay niezaka nampianatra Baiboly sy nanaparitaka ny bokikely amin'ny teny frantsay Réveillez-vous! (malagasy: "Mifohaza!"). Tafatsangana ny fiangonan'ny Vavolombelon'i Jehovah eto Madagasikara tamin'ny taona 1956.
Nanomboka tamin'ny nahazoana ny fahaleovan-tena[hanova | hanova ny fango]
Tamin’ny taona 1960 dia tany Antsiranana i Florent sy i Henriette Chabot avy any Frantsa. I Laval sy i Irène Carbonneau no misionera voalohany teto Madagasikara tamin'ny taona 1961. Hatramin'izay dia noraràn'ny fanjakana frantsay ny famoahana ny Tour de Garde (malagasy: "Tilikambo Fiambenana") nefa tamin'io taona io dia azo navoaka ilay boky amin'ny teny malagasy teto Madagasikara. Taty aoriana tamin'ny taona 1970 dia tsy neken'ny fitondram-panjakana malagasy ny fikambanan'ny Vavolombelon'i Jehovah notarihin'ireo teratany vahiny izay voatery nody any aminy. Ny Malagasy no nanohy ny fitoriana sy nanao ny asan'ny mpisava lalana ka nampianatra ny Baiboly. Tamin'ny taona 1984 vao neken'ny fanjakana malagasy ny fijoroan'ny fikambanan'ny mpianatra ny Baiboly ary tamin'ny taona 1994 vao nankatoavin'ny fanjakana ny Fikambanan'ny Vavolombelon'i Jehovah. Tamin'ny taona 2008 no nivoaka ny dikan-tenin’ny Baiboly an'ny Vavolombelon'i Jehovah amin’ny teny malagasy atao hoe Ny Soratra Masina – Fandikan-tenin'ny Tontolo Vaovao.
Miparitaka eran'i Madagasikara izao ny fikambanan'ny Vavolobelon'i Jehovah sady voadika amin'ny fitenim-paritra malagasy fito amin'izao ny fampianarana sy ny fitoriana na an-taratasy na an-tranonkala. Atao hoe Betela ny anaran'ny foiben'ny fikambanana.
Araka ny voalaza ao amin'ny tranonkalan'ny fikambanana tamin'ny taona 2018 dia miisa 34 980 ny mpitory mampianatra ny Baiboly (tsy voaisa amin'izany ny tsy ampy taona) izay mitsinjara amin'ny fiangonana miisa 736 manerana ny Nosy.
Jereo :[hanova | hanova ny fango]
↑ 1,0 et 1,1 « Ny Tantaranay » (2017) Archived Jiona 5, 2017 at the Wayback Machine
↑ Vavolombelon’i Jehovah maneran-tany, Madagasikara
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Vavolombelon%27i_Jehovah_eto_Madagasikara&oldid=1013931"
Voaova farany tamin'ny 11 Aogositra 2021 amin'ny 05:10 ity pejy ity.